သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်သည့် ကော်မရှင် အရေးတင်ပြချက် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဟောင်း ကန့်ကွက် - Yangon Media Group
သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်သည့် ကော်မရှင် အရေးတင်ပြချက် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဟောင်း ကန့်ကွက်
သူရဦး ရွှေမန်းဦးဆောင်သည့် ကော်မရှင် အရေးတင်ပြချက်ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟောင်း အမျိုးသားလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုးသိမ်းကကန့်ကွက်ခဲ့ရာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်က တုံ့ပြန်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး ကော်မရှင်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ပြင်ဆင်အတည်ပြုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်ဒုတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်နာယကမှ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းကိုတင် ပြမှုအစီအစဉ်တွင် ယင်းသို့ဖြစ်ပွား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါကော်မရှင်ကို ၁.၃. ၂ဝ၁၆ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပြီး ကော်မရှင်၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုသတ်မှတ်ခဲ့ရာ ထိုသို့သတ်မှတ်ထားမှုကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန် လွှတ်တော်နာယကမှတင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြင်ဆင်မှုများမှာ(က)ကော်မရှင်သည်တည်ဆဲဥပဒေများအား လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီးပြင်ဆင်ရန်၊ ပယ်ဖျက်ရန်နှင့်အသစ်ပြဋ္ဌာန်းရန်သင့်သော ဥပဒေများကိုပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်သို့တင်ပြရမည်။ (ခ) ခေတ်ကာလအခြေအနေနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားများအကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေမည့် ဥပဒေကြမ်းများကို ရေးဆွဲပြုစု၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်သို့တင်ပြရမည်။ (ဂ)အထူးကိစ္စရပ်များပေါ်ပေါက်လာပါက ၎င်းကိစ္စရပ်များအပေါ် ဥပဒေအမြင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်၍ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်သို့အစီရင်ခံတင်ပြရမည်တို့ ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် (ဃ) ဥပဒေကြမ်း ရေးဆွဲခြင်းအတွက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၏ တာဝန်ပေးချက်အရ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ (င)နာယကမှ သတ်မှတ်ပေးသည့်လုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်အချိန်ကာလအတွင်းပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ (စ)နာယကမှ ကဏ္ဍအလိုက်သေီးခြားသတ်မှတ် ပေးသည့် အထူးကိစ္စရပ်များအတွက် ကော်မရှင်အတွင်းတာဝန်ခွဲ ဝေဆောင်ရွက်ရမည်။ (ဆ)နာယကမှ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အကြံဥာဏ်တောင်းခံလာသည့်အခါ အကြံပြုချက်များပေးရမည်တို့ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းမူကြမ်းကိုသဘောတူ၊ မတူကို လွှတ်တော်နာယကမှလွှတ် တော်သို့ မေးမြန်းရာယခင်သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဟောင်းအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုးသိမ်းက”ဒီအမိန့် ကြော်ငြာစာနဲ့ပတ်သက်၍ အပိုဒ်(ခ) (ဃ)နဲ့စပ်လျဉ်းပြီးတော့ သဘောမတူတဲ့အချက်ကိုတင်ပြခွင့်ပြုပါ။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲခြင်းကို ပြည်သူကရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များမှလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများကသာ တင်သွင်းခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဆို ပါကော်မရှင်အနေနဲ့ ဥပဒေကြမ်းများကိုရေးဆွဲပြုစုခြင်းမရဘဲ အကြံ ပြုခြင်းသာဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဒါကြောင့် ကျွန်တော်အနေနဲ့သဘောမတူ ကြောင်းတင်ပြပါတယ်”ဟုပြောသည်။
ယင်းအပေါ်ပြည်သူ့လွှတ် တော်ဥက္ကဋ္ဌက အပိုဒ်(ခ)တွင် ဥပဒေကြမ်းကိုရေးဆွဲတင်ပြရမည်ဆိုသည်မှာ မည်သူကိုမဆိုတင်ပြနိုင်သည့်အခြေအနေဖြစ်နေသဖြင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့တင် ပြရန်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ဟုဆိုသည်။ ”ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုတာမပါပါဘူး။ အဲဒီတော့ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်း မည်သူကိုမဆို တင်ပြနိုင်တဲ့အခြေ အနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ယနေ့ဖြည့်စွက်လိုက်တာက ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်သို့တင်ပြရမည်ဆိုတာဟာ ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်ကဖွဲ့စည်းပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို သာတာဝန်ခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုပဲ တင် ပြခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလေးကို ရှင်းလင်းစေချင်ပါတယ်” ဟုပြောသည်။
အချို့အပိုဒ်များတွင်လည်း ရေရာမှုမရှိသောစကားရပ်များကို ဖြုတ်ထားကြောင်း၊ ယခင်ကော်မရှင်၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ယခု ပြင်ဆင်ထားသည်ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကျယ်ပြန့်မှုများကို ထည့်မထား တော့ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကဆိုသည်။ ”ပိုပြီးကျစ်လျစ်ပြီးတော့ ဥပဒေ ပြုရေးမဏ္ဍိုင်နဲ့ ပိုပြီးတော့ဆီလျော် အောင်ဒါကိုနာယကဘက်ကပြုစု တင်ပြတယ်လို့သဘောပေါက်ပါတယ်”ဟုပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောသည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကမှ ဦးစိုးသိမ်း၏သဘောထားအား ပြန်လည်မေးမြန်းရာကန့်ကွက် သူဘက်ကပြန်လည်သဘောတူသဖြင့် ကော်မရှင်၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုအတည် ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။
မြောက်ဦးယဉ်ကျေးမှုဒေသ ယူနက်စကို စာရင်းဝင်ရေး ထင်ရှားသော အမွေအနှစ်များကို စာရင်းပြုစု သုတေ
ဘကကျောင်းများ လျှော့ချ ပိတ်သိမ်းသင့်ကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဆွေးနွေး၊ ဆင်းရဲသော ကလေး
အမေရိကန်တပ်များ ဆီးရီးယားမှ စနစ်တကျရုပ်သိမ်းရန် တူရကီသမ္မတ တိုက်တွန်း
မန္တလေးမြို့တွင်းရှိ ရေမြောင်းများနှင့် ပလက်ဖောင်းများပေါ် ကျူးကျော် စိုက်ပျိုးထားရှိသည့် ?
ကလေးငယ်တစ်ဦးကို ပထွေးဖြစ်သူက မတရား ရိုက်နှက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုကာ ကလေး၏ အဒေါ်ဖြစ်သူက ရဲစခန်းသို့ ?